ⓘ भ्लादिमिर लेनिन
सानै उमेरमा लेनिनले पुश्किन, लेर्मन्तेभ, गोगल, तुर्गेनेभ, निक्रासभ, साल्तिकोभ सेद्रिन र टल्स्टोयका कृतिहरु अध्ययन गरिसकेका थिए । उनले त्यसबेला प्रतिबन्धित बेलिन्स्की, गेर्चेन, चेर्निसेभ्स्की, द्रोब्रोल्युबोभ र पिसारेभजस्ता क्रान्तिकारी डेमोक्रेटहरुका कृतिहरु पढ्न भ्याइसकेका थिए । त्यसबेलाका महान् वैज्ञानिक र जारशाही तथा भूदास प्रथाका कडा बिरोधी नेर्निसेभ्स्कीको ‘के गर्ने?’ उपन्यासले उनलाई प्रभावित पारेको थियो ।
सन् १८९५ मा लेनिनलाई बन्दीगृहमा हालियो र १८९७ मा तीन वर्षका लागि पूर्वी साइबेरियाका एक स्थानमा निर्वासित गरियो। केही समय पछि क्रूप्सकायालाई पनि निर्वासित भएर वहाँ जानु पर्‍यो त्यसपछि लेनिनसित उसको विवाह भयो। निर्वासनमा रहँदा लेनिनले तीस पुस्तकहरू लेखे, जसमध्ये एक थियो "रूसमा पूँजीवादको विकास"। यसमा मार्क्सवादी सिद्धांतहरूका आधारमा रूसको आर्थिक उन्नतिका विश्लेषणको प्रयत्न गरिएको। यहीं उनले आफ्नो मनमा रूसका निर्धन श्रमिकहरू वा सर्वहारा वर्गको एक दल स्थापित गर्ने योजना बनाए।
सन् १९००मा निर्वासनबाट फर्की आउनमा एक समाचारपत्र स्थापित गर्नका उद्देश्यले उनले धेरै नगरहरूको यात्रा गरे ग्रीष्म ऋतुमा उनी रूसका बाहिर गए त्यहींबाट उनले "इस्क्रा" चिनगारी नामक समाचारपत्रको सम्पादन आरम्भ गरे। यसमा त्यसको साथ "श्रमिकहरूको मुक्ति"का लागि प्रयत्न गरने भएका ती रूसी मार्क्सवादी पनि थिए जसलाई जारशाहीका अत्याचारहरूबाट उत्पीडित भएर देशका बाहिर रहनु परेको थियो। १९०२मा त्यसले "हमा के गर्नु छ" शीर्षक पुस्तक तैयारको जसमा यस कुरामा जोर दिया कि क्रांतिको नेतृत्व यस्ता अनुशासित दलका हाथमा हुनुपर्दछ जसको मुख्य कामकाज नैं क्रांतिका लागि उद्योग गर्नु छ। सन् १९०३ मा रूसी श्रमिकहरूका समाजवादी लोकतन्त्र दलको अर्को सम्मेलन हुने/भयो। यसमा लेनिन तथा त्यसको समर्थकहरूलाई अवसरवादी तत्वहरूबाट कडा फलाम लेना पडा। अंतमा क्रान्तिकारी योजनाका प्रस्ताव बहुमतबाट मंजूर भयो र रूसी समाजवादी लोकतन्त्र दल दुइ शाखाहरूमा विभक्त भयो - क्रांतिको वास्तविक समर्थक बोलशेविक समूह र अवसरवादी माशेविकहरूको गिरोह।
सन् १९१३-१४ मा लेनिनले दुइ पुस्तकहरू लिखीं - "राष्ट्रियताका प्रश्नमा समीक्षात्मक "विचार" तथा राष्ट्रो का आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार।" पहलीमा त्यसले बूर्ज्वा मानिसहरूका राष्ट्रवादको तीव्र आलोचनाको र श्रमिकहरूको अंतरराष्ट्रियताका सिद्धांतहरूको समर्थन गरे। अर्कोमा त्यसले यो माँगको कि आफ्नो भविष्यको निर्णय गर्ने राष्ट्रहरूको अधिकार मान लिया जाए। त्यसले यस कुरामा बल दिया कि गुलामीबाट छुटकारा पाने प्रयत्न गरनेभएका देशहरूको सहायताको जाए।
प्रथम महासमरका समयमा लेनिनका नेतृत्वमा रूसी साम्यवादिहरूले सर्वहारा वर्गको अंतरराष्ट्रियता का, "साम्राज्यवादी" युद्धका विरोध का, झण्डा माथि उठाया। युद्धकालमा त्यसले मार्क्सवादको दार्शनिक विचारधारालाई र अघि बढाने प्रयत्न गरे। त्यसले आफ्नो पुस्तक "साम्राज्यवाद" १९१६ मा साम्राज्यवादको विश्लेषण गर्दै बतलाया कि यो पूँजीवादका विकासको चरम र आखिरी मंजिल छ। त्यसले उन परिस्थितिहरूमा पनि प्रकाश डाला जो साम्राज्यवादका विनाशका अनिवार्य बना दे्दछं। त्यसले यो स्पष्ट गर दिया कि साम्राज्यवादका युगमा पूँजीवादका आर्थिक एवं राजनीतिक विकासको गति सब देशहरूमा एक सी छैनती। यसै आधारमा त्यसले यो निष्पत्ति निकाली कि शुरू शुरूमा समाजवादको विजय पृथक् रूपबाट केवल दुई तीन, वा मात्र एक ही, पूँजीवादी देशमा संभव छ। यसको प्रतिपादन त्यसले आफ्नो दुई पुस्तकहरूमा गरे - "दि यूनाइटेड स्टेट्स अफ यूरोप स्मानिसन" १९१५ तथा "दि वार प्रोग्राम अफ दि पोलिटिकल रिवाल्यूशन" १९१६।
जुलाई, १९१७ मा क्रांतिविरोधिहरूका हाथमा सत्ता चली जानेमा बोलशेविक दलले आफ्नो नेताका अज्ञातवासको व्यवस्था गरे यसै सम त्यसले "दि स्टेट ऐंड रिवाल्यूशन" राज तथा क्रांति नामक पुस्तक लिखी र गुप्त रूपबाट दलका संघटन र क्रांतिको तैयारिहरूका निदेशनको कार्य जारी रखा। अक्टूबरमा विरोधिहरूको कामचलाऊ सरकारको तख्ता उलट दिइएको र ७ नोभेम्बर, १९१७ लाई लेनिनको अध्यक्षतामा सोभियत सरकारको स्थापना गरियो। प्रारंभबाट नैं सोभियत शासनले शांतिस्थापनामा बल देना शुरू गरे। जर्मनीका साथ त्यसले सन्धि गर ली; जमींदारहरूबाट भूमि छीनेर सारी भूसम्पत्तिमा राष्ट्रको स्वामित्व स्थापित गर दिइएको, व्यवसाहरू तथा कारखानहरूमा श्रमिकहरूको नियंत्रण भयो र बैकहरू तथा परिवहन साधनहरूको राष्ट्रीकरण गर दिइएको। श्रमिकहरू तथा कुन ानहरूलाई पूँजीपतिहरू र जमींदारहरूबाट छुटकारा मिल्यो र समस्त देशका निवासिहरूमा पूर्ण समता स्थापित गरियो। नवस्थापित सोभियत प्रजातंत्रको रक्षाका लागि रातो सेनाको निर्माण गरिएको। लेनिनले अब मजदूरहरू र कुन ानहरूका संसारका यस प्रथम राज्यका निर्माणको कार्य आफ्नो हाथमा लिया। त्यसले "दि इमीडिएट टास्क्स अफ दि सोभियत गवर्नमाट" तथा "दि प्रोले टेरियन रिवाल्यूशन ऐंड दि रेनीगेड कौत्स्की" नामक पुस्तकहरू लिखीं १९१८। लेनिनले बतलाया कि मजदूरहरूको अधिनायकतंत्र वास्तवमा अधिकांश जनताका लागि सच्चा लोकतन्त्र छ। त्यसका मुख्य काम दबाव वा जोर जबरदस्ती छैन वरन् संघटनात्मक तथा शिक्षण सम्बन्धी कार्य छ।
बाहिरी देशहरूका सैनिक हस्तक्षेपहरू तथा गृहकलहका तीन वर्षहरू १९२८-२० मा लेनिनले विदेशी आक्रमणकारिहरू तथा प्रतिक्रांतिकारिहरूबाट दृढतापूर्वक फलाम लिनको लागि सोभियत जनताको मार्ग दर्शन गरे। यस व्यापक अशांति र गृहयुद्धका समय पनि लेनिनले युद्ध कालबाट भएको देशको बर्बादीलाई टाडा गर स्थिति सुधारने, विद्युतीकरणको विकास गरने, परिवहनका साधनहरूका विस्तार छोटी छोटी जोतहरूलाई मिल्योएर सहयोग समितिहरूका आधारमा ठूला फारम स्थापित गर्ने योजनाहरू आरम्भ गर दीं। त्यसले शासनिक यंत्रको आकार घटाने, त्यसमा सुधार गरने तथा खर्चमा कमी गर्नमा बल दिया। त्यसले शिक्षित र मनीषी वर्गबाट कुन ानहरू, मजदूरहरूका साथ सहयोग गर्दै नयाँ समाजका निर्माणकार्यमा सक्रिय भाग लेने आग्रह लिया।
2. अक्टोबर क्रान्ति
3. लेनिन उपनाम कसरी रह्यो?
निर्वासनबाट फर्केपछि लेनिन सन् १९०० भरि क्रान्तिकारी मजदुर पत्रिका अखिल रसियाली राजनीतिक पत्रिका प्रकाशनको तयारीमा लागे । मे १९०० मा पार्टी निर्माणको लागि पिटर्सवर्गको गोप्य भ्रमण गर्दा लेनिन गिरफ्तार भए, तर खानतलासीको क्रममा केही नभेटेपछि उनले छुटकारा पाए । जारशाही सरकार लेनिनलाई आफ्नो ठूलो शत्रु ठान्थ्यो । त्यसैले देशभित्र बस्ने अवस्था नभएपछि लेनिन १६ जुलाई १९०० मा जर्मनीतर्फ लागे । यही अवधिमा लेनिनले अखिल रसियाली क्रान्तिकारी पत्रिकाको रूपमा ‘इस्क्रा’ फिलिङ्गो को प्रकाशन प्रारम्भ गरे । लेनिन अखबारको मुटु थिए । यस पत्रिकामार्फत् उनले कसरी पार्टी गठन गर्नुपर्छ कसरी आम जनसमूहहरूलाई पार्टी कामतर्फ आकर्षित गर्ने हो भन्ने बारे लेखहरु प्रकाशित गरे । सन् १९०१ देखि भ्लादिमिर इल्यिचले आफ्ना केही लेखहरु लेनिन नामबाट छपाउन थाले । ‘इस्क्रा’ पत्रिकामा काम गर्दागर्दै लेनिनले साइबेरियाली नदी लेनाबाट आफ्नो उपनाम राखेका थिए ।
Lenins Fight to Defend Working-class Power and Revolutionary Internationalism by The Militant
Lenins Funeral Train in its own museum next to Paveletsky Rail Terminal
Lenins speech video – Lenins speech with subtitles
भ्लादिमिर लेनिनको बारेमा वा गरिएका कार्यहरू वर्ल्डक्याट श्रेणीमा रहेको छ ।
The Personality and Power of Nikolai Lenin From Raymond Robins Own Story by William Hard १९२०
Noam Chomsky on Lenin, Trotsky, Socialism the Soviet Union POLITICAL DISCOURSE series
Wikipedia: भ्लादिमिर लेनिन